Nagu saabsan - Wuxi Qianduo Baako Technology Co., Ltd.
Dhalooyinka daawada ee loo yaqaan 'Hdpe' iyo 'PET' waxaa loo isticmaalaa xirxirida alaabada daryeelka caafimaadka, nafaqada, kaabayaasha isboortiga, kaabsulka, kaniiniyada iyo kaniiniyada, dhalooyinka la isku qurxiyo waxaa loo isticmaalaa xirmada kareemka, saliida cinjirka, iwm.
Wuxi qianduo teknoolajiyada wax lagu duubo ee Co., Ltd. waxay ku hawlan tahay dawooyinka iyo caafimaadka dhalooyinka baakadaha caaga ah ee shirkadaha wax soo saarka xirfadeed, shirkaddu waxay daboolaysaa aag dhan 28000 mitir murabac ah, aagga dhismaha oo ah 16000 mitir murabac, oo ka mid ah aqoon isweydaarsiga fasalka 100000 6000 mitir murabac. , heerka foomka oo ah meel bakhaar buuxa oo dhan 6000 mitir murabac ah, xarun cilmi baaris iyo horumarin iyo tayoba leh ayaa lagu qiyaasaa aag dhan 300 mitir murabac.
Dhalooyinka daawada ee loo yaqaan 'Hdpe' iyo 'PET' waxaa loo isticmaalaa xirxirida alaabada daryeelka caafimaadka, nafaqada, kaabista cayaaraha, kaabsoosha, kaniiniyada iyo kaniiniyada. Dhalooyinka qurxinta waxaa loo isticmaalaa xirmada kareemka, saliida cinjirka, iwm. Waxaan sidoo kale bixinnaa adeegga OEM, sida sameynta wasakhda cusub iyo astaanta daabacaadda oo ah naqshadeynta macaamiisha.
Waxay leedahay iibin xirfadlayaal ah iyo koox maarayn tayo farsamo ah, geeddi-socodka koritaanka, waxay siisaa macaamiisha guud wax soo saar tayo sare leh, taageero farsamo oo wanaagsan, adeegga iibka kaamil ah, sumcad wanaagsan, tayo la isku halleyn karo, qiime macquul ah, si loogu guuleysto aqlabiyadda Macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah ee ammaanta sare leh ee joogtada ah, noqda dhalooyinka balaastigga ah ee wax lagu karsado, hogaamiyaha warshadaha. Iyadoo loo marayo dadaalka baacsiga iyo dadaal la'aanta dadka, shirkadaha aadka u caan ah ee aadka u caan baxay ayaa na aqoonsanaya oo noo abuuraya xiriir iskaashi oo waara.
Waxaan had iyo jeer u hoggaansameynaa daacadnimada dhaqanka qilu, u adeegsadaha oo ah xarunta dhexe ee qiimaha asaasiga ah ee ganacsiga, oo leh niyadsamida, horumarinta midnimada, kor u qaadista tayada hal-abuurnimada, ku dhisno xoog dhaqan, si adag u tagno habka warshadaha caafimaadka, hadda waxay leeyihiin PE, PP, dhalada PET, birta been abuurka ah ee UV, qalajiye, calaamadeynta iyo wixii la mid ah waaxda ganacsiga waaweyn.
Waxay u heellan tahay bixinta adeegyo ka wanaagsan, kharashyada oo hooseeya
Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhawaynaynaa inaad nalashaqayso.